कक्षा १२ को ४० पूर्णाङ्कको प्रश्नपत्र सार्वजनिक, कहाँ कर कसरी दिने परीक्षा ? - Media Dabali
कक्षा १२ को ४० पूर्णाङ्कको प्रश्नपत्र सार्वजनिक, कहाँ कर कसरी दिने परीक्षा ?
काठमाडौं- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ का ४१ विषयको नमूना प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले आगामी मंसिर ९ गतेबाट हुने कक्षा १२ को परीक्षाका लागि ४० पूर्णाङ्क तोकेको छ।
कोरोना महामारीका कारण ४० पूर्णाङ्कको परीक्षामा विद्यार्थीमा अन्योल नहोस् भनेर प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
धेरै विद्यार्थी संख्या हुने ४१ वटा विषयको ४० पूर्णाङ्कको नमूना प्रश्नपत्र वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको हो।
कक्षा १२ का लागि यो वर्ष चार हजार एक सय पाँच परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन्। विद्यार्थीले पढेको विद्यालयमा पुगेर परीक्षा दिन सम्भव नभएमा अहिले विद्यार्थी रहेको जिल्लाको नजिकको विद्यालयमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने विद्यार्थीले भने पढेकै विद्यालयमा परीक्षा दिनुपर्नेछ।